Dyes, loo isticmaalay midabka fiberka ama walxaha kale, ayaa loo qaybiyaa laba nooc - midab dabiici ah iyo midab isku-dhafan, oo ay ka mid yihiin midab falcelin, midab dheecaan, midab dheecaan leh, midab dareerayaal, dheecaan dareere ah, midab kala firidhsan, dheeha aashito iwm.
Pigment waa qalab budo ah oo leh midab iyo awood daboolasho, kuwaas oo aan la kala diri karin laakiin lagu xayiran karo biyo, dufan, biyo, dareeraha dabiiciga ah iyo waxyaabaha dhexdhexaadka ah. Pigment waxaa loosoosaaray midab ma ahaaneed iyo midab dabiici ah. Midabyada iftiinka ee loo yaqaan 'Inorganic pigments' waxay u qaybsan yihiin oxide, chromate, sulfate, silicate, borate, molybdate, phosphate, vanadate, cyanates iron, hydroxide, sulfide,
Birta, iwm. Midabaynta dabiiciga ahna waxaa loo qaybiyaa midabaynta azo, midabka phthalocyanine, midabyada anthraquinone, midabka indigo, Midabka Quinacridone, Pigcycly Polycyclic sida oxazine-ⅱ, Midabka ubaxa Fang methane iwm marka loo eego dhismahooda kiimikada .;
Wershaduhu waxay bixiyaan qalab iyo adeeg mashruuc macmacaan oo loogu talo galay shirkadaha wax soosaarka midabka iyo rinjiga .;
Waxaan bixinaa dhammaan wax soo saarka dhirta, adeegga naqshadeynta injineernimada, dib u cusboonaysiinta warshadaha, adeegyada fidinta, adeegyada la talinta maareynta mashruuca, adeegyada naqshadeynta si loo xalliyo dhibaatooyinka ka soo baxa maqaarka iyo wax soo saarka midabka.
Qalabka ugu Waaweyn iyo Hordhaca
Blender: Waxaa loo isticmaalaa iskudhafka budada iyo budada, budada lagu qaso qadar yar oo dareere ah. Kordhinta dareeraha, Wershaduhu waxay u qaabeeyeen hab madaxbanaan lagu qiyaasi karo si loo wanaajiyo tayada isku qasan iyo isku mid ahaanshaha; Isku darka wuxuu leeyahay tilmaamo dhameystiran oo ay ka mid yihiin sheybaarka iyo qalabka wax soo saarka. Noocyo kala duwan, oo ay ku jiraan wax soo saar badan oo isku-dhafan sida kuwa taagan iyo kuwa taagan. Waad dooran kartaa mashiinka ugu habboon iyadoo la raacayo habka wax soo saarka iyo astaamaha alaabada.
Keeniyaha: ay ka mid yihiin gudbinta pneumatic (cadaadiska togan, cadaadiska xun, wejiga cufnaanta iyo wajiga lagu milo) iyo gudbinta farsamada (daboolka, baaldi, silsilad iyo suun)
Mashiinka goynta: oo ay ku jiraan shaandhaynta wareejinta gariirka, shaandheeynta hawada, shaandhayn kala duwan ayaa la heli karaa
Mashiinka Baakadaha: waxaa ku jira bacda waalka iyo mashiinka wax lagu rito ee furan. Iyada oo ku saleysan xaddiga buuxinta, ayaa loo qaybiyaa 5kg, illaa 50 kg iyo baakad bac ah.
Fidinta: Loogu talagalay midabaynta horay u sii faafa. Noocyo kala duwan iyo cayiman ayaa ikhtiyaar ah oo ay ka mid yihiin Kala firdhiso kala firidhsan, Nooca Vacuum Firfircoon, Dual-shaft Kala firidhsan labajibbaarayaasha, Nooca Platform iwm. Ayaa diyaar u ah inay la kulmaan kala-firdhin kala duwan, shuruudaha isku-darka.
Emulsifier-xiir-dheer: waxaa loo isticmaalay kala-soocidda midabka, is-dhexgalka, xoqidda iyo dib-u-hagaajinta, waxaa loo qaybiyaa nooca dufcadda ah iyo nooca gudaha ah; nooca dufanka nooca loo yaqaan 'emulsifier nooca' ah waxaa lagu habeyn karaa nooca xirmooyinka dusha sare oo isku duuban iyada oo la adeegsanayo agitariyo kala duwan si loo gaaro hal mashiin oo leh howlo badan; emulsifierku sidoo kale waa loo qaabayn karaa nooca vacuum-ka ah, oo loo heli karo kuleylinta iyo noocyo kale oo badan iyadoo loo eegayo shuruudaha soosaarka kaladuwan.
Basket Mill: Nooc ka mid ah qalabka qashin-qubka, waxay isku daraysaa kala-qaadidda iyo shiididda laba geedi socod hal mashiin. Waxay yareysaa geedi socodka wax soo saarka iyo sidoo kale iyada oo aan lahayn matoor ama tuubooyin la'aan, sidaa darteed waxay wanaajineysaa waxsoosaarka wax soo saarka waxayna yareysaa qashinka. Ka sokow, way fududahay in la nadiifiyo, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu habboon shuruudaha wax soo saarka ee noocyo badan oo kala duwan oo alaab ah oo leh mug yar ;;
Beads Horizontal Beads Mill: Mashiinka qashin-qubka ee loo isticmaalo qaniinyada midabka leh shuruudo kama-dambaysta kama dambaysta ah. Waa natiijo wanaagsan oo ku shiidid iyo hufnaan aad u sareysa. Waa mashiinnada qodista ee ugu badan ee laga isticmaalo suuqa oo ay ku jiraan nooca nooca 'Discorizon Horizontal Beads Mill' iyo All-wareega Horizontal Beads Mill.
Xariiqda oo dhan waxay noqon kartaa iskudarka mashiinada hal ama qadka soosaarka otomaatiga oo ay la socoto tikniyoolajiyada soosaarka horumarsan oo ay kujirto nidaamka quudinta agabka, nidaamka cabirka, kala-goynta iyo nidaamka qodista, nidaamka isku-dhafka badan iyo nidaamka wax-qarinta, nidaamka nadiifinta, nidaamka kontaroolka otomaatiga ah, nidaamka buuxinta otomatiga iwm. ku saleysan qeybta midabka iyo shuruudaha soosaarka.
Waqtiga boostada: Jun-19-2020